MENA: Nametra-pialana ny mpandrindra ny fampielezan-kevitr’i Obama ho an’ny Miozolomana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2018 2:05 GMT
Nametra-pialàna i Mazen Asbahi, mpisolovava nanolo-tena ho an'ny Amerikanina Miozolomana sy Arabo mba ho mpandrindra ny fampielezan-kevitr'i Barack Obama taorian'ny fiampangana azy ho mifandray amin'i Jamal Said, imam ao amin'ny moské fondamentalista iray ao Illinois. Niasa nandritra ny fotoana fohy tao amin'ny biraon'ny Allied Assets Advisors Fund niaraka tamin'ny Said tamin'ny taona 2000 i Asbahi.
yaman's amateur ramblings, mpianatra Syriana iray any Etazonia, manamarika ny tsy fahombiazan'ny fampielezan-kevitr'i Obama hipaka amin'ireo Silamo sy Arabo-Amerikana mpifidy :
Taorian'ny 8 taonan'ny fitondrana Bush, sahirankirana ny Amerikanina Miozolomana sy Arabo, tahaka ny hafa vao mahatsiaro ho voaaro sy tongasoa ao an-tanindrazany indray. Raha nanambara i Barack Obama fa vonona ny hiova, maro no nahatsapa voalohany fa azo atao ny manantena zavatra tsy dia matroka kokoa noho ny lova navelan'i Dick Cheney sy Donald Rumsfeld. Indrisy anefa fa nampiseho indray ny fampielezan-kevitr'i Obama fa liana kokoa milalao miaraka amin'ny fampahalalam-baovao tsy tompon'andraikitra sy ny mpifidiny taloha izy, fa tsy ny fananganana firaisankina eo amin'ny Amerikanina avy amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny sarangam-piainana rehetra. Raha te ho kandida ho an'ny fanovana i Obama, dia tsy maintsy asehony izany fanovana izany mandritra ny fampielezan-keviny, tsy amin'ny alalan'ireo fampanantenana hotanterahina aorian'ny fifidianana ihany.
Mamintina amin'ny fanomezany ny soso-keviny manokana momba ny fomba hahatongavan'ny fampielezan-kevitr'i Obama amin'ireo mponina ireo ilay bilaogera :
Raha te-hipaka any amin'ny fiarahamonina Miozolomana Amerikana i Obama, dia mila manao izany izy amin'ny alàlan'ny fanohanana azy ireo manoloana ireo fampielezan-kevitra rehetra fanosihosena mitovy izay mahomby amin'ny fananganana ny Silamo rehetra, sy ny Arabo rehetra, ho “tsy azo kitihana” raha resaka politika sy fampielezan-kevitra any Etazonia. Mila mandray tsara ny ahiahin'izy ireo mikasika ny fifindra-monina, ny fanorisorenana ny sampan-draharahan'ny Fiarovana Anatiny, ary ny politika ivelany any amin'ny toerana toa an'i Iraka, Afghanistan ary Palestina izy. Raha manao izany izy dia midika zavatra bebe kokoa amin'ny Amerikanina Miozolomana sy Arabo noho ny famoronana asa fampielezan-kevitra an'ohatra izay toa tsara jerena an-taratasy kanefa mety tsy hahavita zavatra – na dia i George Bush aza nanendry mpanolotsaina iray tao amin'ny Trano Fotsy mba hisolotena ny fiarahamonina Miozolomana nandritra ny fe-potoam-piasany, saingy tsy misy olona avy amin'ny vondrom-piarahamonina Amerikana Miozolomana na Arabo miantso izany ho karazana “fiovana” izay notadiavin'izy ireo.
Avy ao Maraoka, Myrtus mametraka fanontaniana sarotra:
Nahoana no miafara amin'ny disadisa foana ny zava-drehetra momba ny Miozolamana manodidina an'i Obama, na dia lavitra aza?
Tsotra fotsiny satria tsy misy ampitsony ny fampielezan-kevitr'i Obama na matanjaka loatra ny Ankavanana?
Israel Matzav manombatombana ny fomba nanakaramana an'i Asbahi tamin'ny voalohany:
Saingy misy fomba roa hafa ny antony nahatonga izany. Ny iray dia ny hoe Barack Hussein Obama sy ny fampielezan-keviny tsy mahita ratsy mihitsy amin'ny fampiasana olona mifandray amin'ny mpampihorohoro. Na izany na izany, araka ny voalazan'i Ed, nandany fotoana bebe kokoa niaraka tamin'i William Ayers fa tsy tahaka ny nataon'i Asbahi tamin'i Said Obama tenany.
Ny fomba faharoa dia ny karazana Miozolomana izay tsy mpanohana ny mpampihorohoro – ny Noni Darwish, ny Ayan Hirsi Ali, ny Wafa Sultan – tsy hiasa ho an'ny fampielezan-kevitr'i Obama ary tsy hisarika mpifidy Miozolomana maro.
Tsy misy amin'ireo fambara tsara ho an'ny fiadidian'ny Obama na ny hoavin'i Etazonia.
Will ao amin'ny KABOBfest, manamarika amin'ny tantara momba ireo mponina Gaza mividy t-shirt Obama tsy ara-dalàna, ary nilaza ity momba ny fialàn'i Asbahi:
Nitranga izany rehefa nanafaka ny mety ho fifandirana Arabo-Islamika ny fampielezan-kevitra. Nametra-pialana 9 andro taoriana ny mpirotsaka an-tsitrapony mpandritra ny Fifandraisana amin'ny Miozolomana, mpisolovava ao Chicago, Mazen Asbahi mba hisorohana ny fikasana tsy iriana rehetra amin'ireo fikambanany taloha miaraka amin'ireo vondrona sy olona sasantsasany izay mino ny fifandraisana amin'ny Mpirahalahy Miozolomana. Eny, angamba “ombalahy (taureau)” izy rehetra. Saingy avo kokoa ny fenitra rehefa Arabo na Miozolomana ianao. Ary mbola avo kokoa raha mihevitra ny 12% amin'ny Amerikana fa Miozolomana ny kandida.
* Hita ao amin'ny Voices without Votes ihany koa ity lahatsoratra ity.